Diyaar u ah inaad mar kale xaflad samayso: iibinta Champagne waxay dejineysaa diiwaanno cusub
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Khamriga & Ruuxa » Diyaar u ah inaad mar kale xaflad samayso: iibinta Champagne waxay dejineysaa diiwaanno cusub
Jebinta Wararka Yurub • Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • kariska • dhaqanka • Wararka Faransiiska • Wararka Raaxada • News • Dadka • Shopping • Dalxiiska • Warka Safarka Safarka • Daalacanayo Hadda • Khamriga & Ruuxa
Diyaar u ah inaad mar kale xaflad sameyso: Iibka Champagne wuxuu dhigayaa rikoor cusub.
Isu -soo -baxyada hadda ka socda suuqyada shaambada ee adduunka ayaa laga yaabaa inay iibiyaan 305 milyan oo dhalooyin oo adduunka oo dhan ah sannadka 2021, tiradaas oo ahayd tii ugu dambeysay ee la arko 2017.
Qeybta Champagne ayaa hoos u dhacday ku dhawaad ​​18 boqolkiiba sanadkii hore kadib markii ay hoos u dhacday 2% sanadka 2019.
Iyada oo ku saleysan kororka hadda jira, iibinta shaambada ayaa la filayaa inay koraan qiyaastii 4% sannadkan, waxayna sii wadi doontaa isbeddelka illaa 2025.
Iibinta Champagne intii u dhexeysay Janaayo iyo Agoosto ayaa sare u kacday 11.9%, xitaa marka la barbar dhigo isla muddadii hore ee cudurka faafa ee 2019.
Sida laga soo xigtay kooxda beeralayda khamriga champagne ee Faransiiska SGV, champagne iibintu waxay ku socotaa inay gaadho meel sare oo afar sano ah sannadkan, iyada oo ay ugu wacan tahay dhoofinta oo aad u sii kordhaysa Maraykanka iyo Australia.
Iibinta buunbuuninta ah ayaa sii kordheysa, oo dib ugu soo laabaneysa muggii ugu dambeeyay ee la arko ka hor inta uusan cudurka faafa ee coronavirus -ka adduunka iyo xannibaadaha xigay direen iibka, maadaama dadka laga mamnuucay inay tuuraan xaflado.
champagne iibinta intii u dhexeysay Janaayo iyo Agoosto ayaa sare u kacday ku dhawaad ​​12%, xitaa marka la barbar dhigo isla muddadii hore ee cudurka faafa ee 2019.
Waqtigaas, guryaha shaambada ee Faransiisku waxay rarteen 297.6 milyan oo dhalooyin adduunka oo dhan. Sannadkii 2020, si kastaba ha noqotee, gobolku wuxuu dhoofiyay 244 milyan oo dhalooyin oo keliya, sida laga soo xigtay xogta ururka ganacsiga Comité Champagne. Wareejinta qaybta, oo ah warshadda labaad ee ugu weyn ee wax dhoofinta Faransiiska ka dib duulimaadyada hawada, waxay muujisay khasaare macaash dhan $ 980 milyan.
"Qeybta ayaa hoos u dhacday ku dhawaad ​​18% sanadkii la soo dhaafay kadib markii ay hoos u dhacday 2% sanadka 2019," falanqeeye ka socda UK Wines International Record and Spirits Record (IWSR) ayaa u sheegay CNBC, isagoo soo xiganaya tirooyinka Falanqaynta Suuqa Cabitaannada kooxda. Hadda, oo ku saleysan kororka hadda jira, shirkaddu waxay filaysaa champagne iibinta si ay u koraan qiyaastii 4% sanadkan, oo ay sii wadaan isbeddelka illaa 2025.
Saadaasha Ururka Guud ee Faransiiska ee Champagne Winegrowers ayaa xitaa ka rajo fiican. Kooxdu waxay filaysaa in isu -soo -baxyada hadda ka socda suuqyada shaambada ee adduunka laga yaabo inay iibiyaan 305 milyan oo dhalooyin adduunka oo dhan sannadka 2021 -ka, tiradaas oo ahayd tii ugu dambeysay ee la arko 2017.
Khubarada qaarkood waxay rumeysan yihiin in dadku ay diyaar u yihiin inay mar kale xaflad sameeyaan ka dib markii ay muddo sannad ka badan xirnaayeen.
Natalie Pavlatos, oo ah afhayeenka xafiiska Champagne ee fadhigeedu yahay Mareykanka, ayaa CNBC u sheegtay "Haddii aan qiyaasayo, waxaan u malaynayaa in macaamiisha ay diyaar u yihiin inay u dabaaldegaan xitaa waxyaalo yar yar oo nolosha ah." In kasta oo xilligii fasaxa uu weli socdo, Pavlatos waxay xustay in xafiiskeedu uu durba helayo warbixinno iib ah oo ka sarreeya heerarkii sannadkii hore.
"Markaa waxaa laga yaabaa inaan aragno oo kaliya inaan ku soo laabanno sidii caadiga ahayd laakiin xitaa waxqabad ka wanaagsan sidii aan ahaan jirnay sannadka 2019," ayuu yiri Pavlatos.